ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံရခြင်း တစ်နှစ်ပြည့် စုဝေးပွဲပြုလုပ်၊ သတင်းထောက်နှစ်ဦ? - Yangon Media Group
ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံရခြင်း တစ်နှစ်ပြည့် စုဝေးပွဲပြုလုပ်၊ သတင်းထောက်နှစ်ဦ?
ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦး ဖမ်းဆီးခံရခြင်း တစ်နှစ်ပြည့်စုဝေး ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ မြို့တော်ခန်းမရှေ့ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က ပြု လုပ်ခဲ့သည့် အဆိုပါစုဝေးပွဲကို တက်ြ<ွကလှုပ်ရှားသူများပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့ပြီး ရိုက်တာသတင်းသမားနှစ်ဦးကိုခြွင်းချက်မရှိ လွှတ် ပေးရန်နှင့် တရားမျှတမှုအတွက် ရန်ကုန်မြို့တွင် စုဝေးတောင်းဆို ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရသည်။ ”သတင်းထောက်တွေကို နိုင်ငံတော်သမ္မတကနေ လွတ် ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့ အစီအစဉ် ထက် တရားရုံးကနေလွှတ်ပေး တယ်ဆိုတာကို ပိုပြီးတော့ သ ဘောကျပါတယ်” ဆန္ဒထုတ်ဖော် ပွဲ ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်သူ မောင်ဆောင်းခက ပြောသည်။
ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦး တို့ကို နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက် အက်ဥပဒေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး က ထောင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ်စီ ချမှတ် ထားခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် အဆိုပါပြစ်ဒဏ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အယူခံတင်ထားကာ လာမည့် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ကြားနာ မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါစုဝေးပွဲတွင် သတင်းသမားနှစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံရခြင်းတစ် နှစ်ပြည့်သည့်အထိမ်းအမှတ်အ ဖြစ် ငြိမ်သက်ခြင်း၊ မီးထွန်းတောင်း ဆိုခြင်း၊ မိုးပျံပူဖောင်းလွှတ်တင်ခြင်း များကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တက် ရောက်လာသူများက Free Wa Lone & Kyaw Soe Oo ဟူသည့် စာတမ်းပါ အင်္ကျီများကိုဝတ် ဆင်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။
ယင်းအပြင် သတင်းသမားနှစ်ဦး ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးခံရ ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာသ တင်းသမားများ ကာကွယ်ရေး ကော်မတီက စာမျက်နှာ ၁ဝ မျက်နှာပါသည့် အစီရင်ခံစာတစ်စောင်လည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင် အမှုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အား နည်းချက်၊ မှားယွင်းချက်များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြီး နိုင်ငံ တော်သမ္မတနှင့် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ထံ ပေးပို့သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာသတင်းသမားများ ကာကွယ်ပေးရေးကော်မတီ မှ ကိုသာလွန်ဇောင်းထက်က ပြောသည်။ သတင်းသမားနှစ်ဦးကို ပြီးခဲ့သည့် ၂ဝ၁၇ နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က လျှို့ဝှက်စာရွက်စာတမ်း များ လက်ဝယ်တွေ့ရှိသူဟုဆိုကာ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယနေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံရခြင်း တစ်နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ် သည်။
အဖွဲ့ဝင် ၁၈ ဦးပါဝင်မည့် အနုပညာခြေလှမ်းသစ် အကြောင်း NCT အဖွဲ့ကြေညာ
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုယန္တရားအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌကို ကုလသမဂ္ဂမှ ခန့်အပ်မှု ??
ဟောလိဝုဒ် ကျော်ကြားသူတို့ လျှောက်လမ်းတွင် ဂုဏ်ပြုခံရတော့မည့် ဒန်နီယယ်ခရိတ်